2017 | Puntland News | 253
Home » 2017 (Page 253)
Musharax Farmaajo Oo War Culus Kaga Dhawaaqay Muqdisho Eeedayna U Jeediyey Hogaanka Dalka.
Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo ah musharrax u taagan xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa shir jaraa’id oo uu Muqdisho ku qabtay maanta ku sheegay in uu aad u saluugsanyahay hab dhaqanka madaxda dalka isaga oo ku eedeeyay in ay ku fashilmeen in ay kasoo dhalaalaan ballamihii ay qaadeen […]
War deg deg ah oo caawa naga soo gaarey Galkacyo iyo ciidamo badan oo kusii dhex qaadaya.
Ciidamo Boolis oo ka socda maamulka Galmudug ayaa howlgal baaritaano ah ka wada magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobolka Mudug, ciidanka ayaa baaraya gaadiidka iyo dadweynaha. Ujeedka ugu muhiimsan ee howlgalka Gaalkacyo ayaa lagu tilmaamay mid lagu doonayo in lagu xaqiijiyo amniga,islamarkaana meesha looga saaro falalka amnidaro. Magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobolka Mudug ayaa bila ka […]
War degdeg ah: Madaxtooyada Puntland oo war culus kasoo saartay heshiiskii Puntland iyo Galmudug.
Kulanka lagaga arrin sanayey xasiloonida iyo nabadaynta magaalada Gaal kacayo ayaa waxaa goob-joog ka ahaa Madaxweynaha Dawladda Fadaraalka Soomaaliya mudane Xasan Shiikh Maxamuud , Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake, wakiilka qaramada midoobey u qaabilsan Soomaaliya ambassador Michael Keating. Ugu horayn Madaxweynaha Dawladda puntland oo lahadlay shirka kadib warfidiyeenada ayaa fursad weyn ku […]
War degdeg ah: Guddiga doorashada gudoomiyaha barlamaanka iyo ku xigeenadiisa oo la magacaabay, yaa hogaaminaya guddigaan?
War degdeg ah: Puntland iyo Galmudug oo heshiis degdeg kala saxiixday iyadoo lagu dhawaaqay in…
Wararka lagu kalsoon yahay oo ay heshay Puntlandnews ayaa sheegaya in Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo madaxwyenaha Galmudug Cabdikariin Xuseen Gulled ay maanta magaalada Muqdisho ku kala saxiixday heshiis degdeg ah oo lagusoo afjarayo xiisadaha colaadeed ee Gaalkacyo kasoo cusboonaaday. Heshiiskaan ayaa qodobadiisa ugu weyn waxaa kamid ah, in la furo isku socodka […]
War Deg-Deg Ah: Dhalinyaro Ka Baxday Diinta Islaamka Oo Lagu Xukumay Magaalada Hargeisa.
Maxkamada degmada Hargeysa ayaa xukuno kala duwan ku riday dhalinyaro ku eedeysnaa inay diinta Islaamka ka baxeen, isla mar ahaantana ciidamada amaanku gacanta ku soo dhigeen badhtamaha sanadkii dhamaaday. Gudoomiyaha Maxkamada degmada Hargeysa Cabdirashiid Maxamed Xirsi Beergeel oo isagu qaadayay dacwada dhalinyaradan,ayaa xukunka dacwadani kaga dhawaaqay kal fadhigii ugu danbeeyay ee dhageysiga dacwadani. Kaas oo […]
War degdeg ah oo hadda Garowe nagasoo gaaray iyo dadweyne caraysan oo xiray wado laami ah oo uu aad u isticmaalo madaxweyne Gaas.
Garowe 1 January:- Dadweyne caraysan ayaa maanta duhurnimadii xiray mid kamid ah wadooyinka laamiga ah ee kuyaala magaalada Garowe ee caasimadda, kadib baabuur xowli ku socday uu jiiray wiil yar oo wadada marayay. Dadweynaha xaafadaha ayaa isugu baxay kadib markii uu falkaan dhacay waxayna dhagxaan ku jareen wadada laamiga ah ee marta xaafadaha Wadajir, Horseed […]
War degdeg ah: Maxkamada darajada koowaad ee gobolka Nugaal oo ku dhawaaqday go’aan culus iyo khilaaf culus oo….
Maxkamada darajada koowaad ee gobolka Nugaal ayaa walaac xoogan ka muujisay fulin la’aanta awaamiirta kasoo baxda maxkamada oo aysan fulin laamaha booliska gobolka Nugaal. Sargaal katirsan maxkamada oo u warramay Puntlandnews ayaa u sheegay in gudoomiyaha maxkamada Sheikh Cabdinuur Jaamac Xuseen uu aad uga caraysan yahay kadib markii laamaha booliska ay ka jawaabiyeen amaro maxkamada kasoo […]
DHEGEYSO-War hadda naga soo gaarey Bacaad-weyn iyo go’aan kadhan ah maamulka oo looga dhawaaqay…
Qaar kamid ah waxgaradka deegaanka Bacaadweyn ee gobolka Mudug ayaa siweyn uga cabanaya maamulkii deegaanka oo ay sheegeen in waqtigiisii dhammaaday,w axaana ay baaq u direen wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda Puntland. DHEGEYSO
War deg deg ah oo hadda nasoo gaarey iyo ciidamo hubaysan oo lawareegey xarunta…
Wararka ka imaanaya madaxtooyada Soomaaliya waxay sheegayaan in halkaasi ay goor dhow la wareegeen ciidamo gaar ah oo ka tirsan Alfa Group. Ciidamadan oo aad u qalabeysan ayaa hoyga Madaxweynaha, Ra’iisul wasaaraha iyo dhammaan xafiisyada Villa Soomaaliya isku gadaamay, kadib markii laga shakiyey ilaaladii Villa Soomaaliya. Ciidamadan ayaa bannaanka isaga saaray dhammaan wixii ciidan kale […]
War degdeg ah: Madaxweyne Gaas oo Farriin culus kasoo diray Muqdisho.
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo hawlo shaqo u jooga magaalada muqdisho ee caasimada Soomaaliya ayaa maanta 01 January 2016 ugu hambalyeeyey guud ahaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan Shacabka reer Puntland iyo shucuubta caalamkaba dhalashada sanadka cusub awgeed ee 2017-ka. Ugu horayn Madaxweynaha ayaa illahay uga baryey ummadda Soomaaliyeed in ay sanadkaan […]
Musharax Cabdiraxmaan Faroole o o Garoowe warkii ugu cuslaa k aga dhawaaqaya…
Madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Maxamuud Faroole ahna musharax u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya ayaa saaka lafilayaa inuu Garoowe kaga dhawaaqo warr cusub. Xafiiska warfaafinta musharax ayaa warfidiyeenka ku wargeliyey inay yimaadaan guriga musharax, waxaana warar hoose sheegayaan inuu ku wajahan yahay magaalada Muqdisho. Musharax Cabdiraxmaan Faroole ayaa waxa uu kamid yahay […]
Breaking news-Warar hoose oo soo baxaya iyo kudhowaad saddex askari oo dilkooda laqariyey ayna Alshabaab sheegatay.
Xoogaga Xarakada Al Shabaab ayaa sheegtay in Weerar Qarax ahaa ay ku Dileen Ciidamo ka tirsan kuwa Midowga Afrika ee AMISOM. Sarkaal ka tirsan Al Shabaab ayaa warbaahinta ku hadasha Afkooda waxuu u sheegay in Qaraxaasi uu ka dhacay Degaanka Leego, islamarkaana ay ku Dileen ugu yaraan 3 Askari oo ka mid ahaa Ciidamada AMISOM. […]
DHEGEYSI XASAASI AH-Wasiirka maaliyadda oo ku dhawaaqay war ka nixiyey xildhibaanada aqalka sare sheegayna inaan 3 bilood mushahar loohayn.
Wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda Soomaaliya Maxamed Aadan Ibraahim ayaa sheegay in xildhibaanada aqalka sare aysan wax mushahar ah qaadan dooni mudo saddex bilood ah aysana kujirin miisaaniyaddii deganayd ee hore. DHEGEYSO
War deg deg ah oo saaka naga soo gaarey deegaanka Dudun ee xuduudka Puntland iyo DDSI.
Xaaladda deegaanka Dudun ee gobolka Mudug ayaa lagu soo waramayaa inay maalintii saddexaad degan tahayb kadib dagaal dhowaan ku dhexmaray ciidanka dowladda Puntland iyo kuwa dowlad deegaanka dalka Itoobiya. Waxaa socda dedaaladii ugu dambeeyey ee xal looga gaarayo xiisadihii halkaasi kadhacay kadib markii ay kulmeen mas’uuliyiinta labada dhinac oo xabad joojin iyo qodobo hordhac ah […]
War degdeg: Murashixiinta madaxweynaha oo go’aan culus uga dhawaaqay Muqdisho, baaq degdeg ahna udiray barlamaanka.